Mustaqbalku Maaha Shaqo La’aan Waligiisna Ma Noqon | Martech Zone
Dhibaatooyinka ku saabsan mustaqbalka sirdoonka farsamada, robotikada, iyo otomaatiga ayaa runtii u baahan in la joojiyo. Kacaan kasta oo warshadeed iyo farsamo oo taariikhda ah wuxuu aadanaha u furay fursado aan xadidnayn oo lagu dabaqo kartidooda iyo hal-abuurkooda. Maaha in shaqooyinka qaarkood aysan lumin - dabcan way baaba'aan. Laakiin shaqooyinkaas waxaa beddelay shaqooyin cusub.
Markii aan eegay hareeraha xafiiskayga maanta oo aan dib u eegay shaqadeena, waa wax cusub! Waxaan daawadaa oo aan ku soo bandhigaa barnaamijkeena AppleTV, waxaan dhagaysanaa muusikada Amazon Echo, waxaan soo saarnay barnaamijyo badan oo moobiil ah oo loogu talagalay macaamiisha, waxaan u haynaa barnaamijyo infographic ah oo loogu talagalay macaamiisha, toddobaadkan waxaan ka caawinnay laba macmiil oo waaweyn arrimaha qaddarinta raadinta dabiiciga ah, waxaan ahay ku daabacida tan nidaamka maaraynta waxyaabaha, waxaanan ku horumarinaynaa qodobbada warbaahinta bulshada.
Xaqiiqdu waxay tahay, Weligay kuma riyoon xitaa 15 sano ka hor inaan yeelan lahaa wakaalad suuq-geyn dijitaal ah oo aan ka caawin doono macaamiisha inay maraan suuq-geynta internetka. Jidka mustaqbalku ma sii dhumanayo oo sii caatowdo, ee wuxuu isu furayaa sii ballaadhin iyo ka sii ballaadhan! Marxalad kasta oo otomaatig ah waxay si fudud ugu suurtagelisaa marxaladda cusub ee horumarka iyo hal-abuurnimada. Intii aan u qabanayno tan fikirka iyo shaqada hal-abuurka ah macaamiisheenna, in badan oo ka mid ah maalmaheenna waxaa lagu qaataa dhaqaajinta xogta, dejinta nidaamyada, iyo fulinta. Haddii aan awoodno inaan yareyno cunsurradaas, waxaan abuuri karnaa wax intaa ka sii badan.
Waxaan aaminsanahay caqabadayada, gaar ahaan Mareykanka, inay tahay inaan wax barano una diyaarino ardaydeena shaqooyinka dabar go’aya. Waxaan ubaahanahay nidaam gebi ahaanba cusub si aan u diyaarino jiilalka soo socda si aan ugu dhufanno dhulka ku shaqeynaya tikniyoolajiyadan cusub.
Nolosha Gumeysiga waxay soo saartay muuqaalkan, 15 Shaqooyin Aan Soo Jirin 30 Sano Kahor. Markaad dib u eegto liiska shaqooyinka iyo celceliska mushaaraadka, fiiro gaar ah u yeelo inta ku jirta warbaahinta dhijitaalka ah!
Tags: app soo saareBloggersarkaalka dhageysiganolosha gumeysigahowl wadeenka diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Dronesmustaqbalkainfographicfalanqeeye amniga macluumaadkashaqocilmiga seomaamulaha warbaahinta bulshadanaqshadeeyaha khibrada isticmaalahakaaliyaha dalwaddiifalanqeeyaha shabakadda